१२ बजे राती किन खनियो चिहान अनि को हुन ६ बर्ष अघि बितेका जीवन? बल्ल खुल्यो सम्पुर्ण रहस्य र नालीबेली (भिडियो सहित) «
प्रकाशित मिति : ५ माघ २०७७, सोमबार ०७:५३
मानिस मरेको ६ बर्ष बितेपछी उसको आत्मा फेरि भड्किएर हिड्छ होला त! कसैले पत्याउनै नसकिने घटना मोरङको बेलबारिमा घटेको छ । एकाएक सबै गाउँले बिरामी पर्दै आत्मा पसेर दुख दिन थालेपछि गाउँ नै चिन्तामा परेको छ । करिब छ बर्ष अगाडी मृत्यु भएका जीवन राईको आत्मा हरेक बिरामीमा पसेर बोल्न थालेपछि गाउँ नै त्रसित बनेको छ ।
ज्यान जोखिममा राखेर सफलता पाउने झाक्रीलाई भगवान मानेर पुरै गाउँलेहरुले सम्मान समेत गरेका छन । ६ बर्ष अगाडी सन्सार छाडेका जीवन राइको बिगत घटनाको सम्पुर्ण नालीबेली र भित्री रहस्य गाउलेहरुले सुनाउदा सबैको होस उड्यो । आत्माले गाउँमा यस्तोसम्म गरेको रहेछ । सबै चकित बनाउने तलको भिडियो हेर्नुहोस होस उड्नेछ